Obere Pixel Pitch 3.91mm Ngosipụta vidiyo nke ime ụlọ maka nha ọgbakọ: 4mx3m Ọnọdụ: Slovak Eachinled nwere ọtụtụ ihe ngwọta LED dị n'ime, obere pikselụ ime ụlọ vidiyo dị site na 1.6mm, 1.9mm, 2.5mm, 2.9mm, 3.91mm n'ime ụlọ, ndị ọzọ eji na TV ngosi, sinima, ụlọ ọrụ nzukọ ụlọ ...
Ime ụlọ Ihe Omume Ndabere Ndabere Mgbidi P4.8 SMD Ngosiputa ime ụlọ
Ime ụlọ Ihe Omume Ndabere N'ala Led Wall P4.8 SMD Ime N'ihu Ngosipụta Dimension: 3x2m Typedị :dị: P4.8 Na ngwụsị izu anyị na-ahụkarị ọtụtụ ihe na ụlọ ahịa, ịzụ ahịa ụlọ ahịa ejiji, nlekọta anụ ọhụrụ nkwalite ngwaahịa, ngosipụta ụgbọ ala mkpanaka na ngwaahịa ndị ọzọ akwalite. na technol ...
Mpaghara ihuenyo: 20.736mx2.304m. Dịrị: Mgbasa ozi mgbasa ozi Saịprọs agbanweela site na akwụkwọ akụkọ redio ọdịnala na akwụkwọ gaa na netwọkụ telivishọn dị ugbu a na ime ụlọ / n'èzí ọkachamara LED. Eachinled na-aga n'ihu ịmụ ihe ọhụrụ, emeela nke ya na ụlọ ọrụ ngosi. Anyị ...
Ugboro ole ka ntinye ụzọ na nkwari akụ?
Enwere usoro ntinye 3 na nkwari akụ. N'ịnyịnya n'ime mgbidi Ikanam ihuenyo Nọkwasịrị n'ime mgbidi pụtara arụnyere na etiti nke ogbo. N'akụkụ abụọ nke ebe a, a na-agba ihe osise ma ọ bụ ákwà mgbochi akwa gauze, nke na-eme ka ndị mmadụ hụ naanị foto. Kinddị LE ...
P3.9 ime ụlọ 500 square mita ihuenyo ga-adị na ngwaahịa na njedebe nke ọnwa a
Ihe achọrọ maka mgbidi vidiyo P3.9 karịrị ọkọnọ. E nwere mita 500 squre nke panel na-ere ugbu a, yabụ anyị kpebiri idobe mita 500 ọzọ nke videowall a. Kedu ihe kpatara usoro a ji bụrụ ihe ewu ewu? Ọ na-adọrọ mmasị na ọmụmụ ihe na-egosi na ọ bụ n'ihi ihuenyo mgbazinye ụlọ nke ime ụlọ ...
Ledwall maka Live Ihe nke Pope Francesco Na Italy
Okwu: Italia Ledwall Size: 6mx4m N'afọ a, Pope Francesco laghachiri n'Italytali wee bịa ileta ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị na 7th, Eprel iji rụọ ọrụ mgbazinye. Ọ bụ n'ezie nnukwu nsọpụrụ anyị inye ya mgbidi ahụ. Ezubere P6.25 n'èzí mgbazinye ada panel na 2016, n'ire ebe nke a l ...